Aragti-doon: Duugista kuleylka Duullimaadka | Martech Zone
Eyequant: Kuleylka ku duulaya Duullimaadka
Tuesday, May 15, 2012 Sabtida, Juun 8, 2017 Douglas Karr
EyeQuant waa moodo indho-indheyn saadaalin ah oo si qaas ah u eegaysa waxa adeegsadayaashu ku arkaan bogga ugu horreeya 3-5 ilbidhiqsi. Fikraddu way fududahay: 5 ilbidhiqsi gudahood isticmaale waa inuu awood u yeeshaa inuu arko qofka aad tahay, waxa qiimeyntaadu tahay, iyo waxa xiga ee la sameeyo. EyeQuant waxay u oggolaaneysaa hagaajinta qaabeynta bogga si loo hubiyo in tani ay tahay kiiska.
Waa kuwan natiijooyinka bilaashka ah ee muuqaalkayaga 'EyeQuant demo' quite Aad ayaan ugu faraxsanahay halka dareenka la gelinayo boggeena guriga!
Waxa ka soocaya EyeQuant iyo adeegyada kale waa xaqiiqda ah inay qaadanayso daqiiqado kooban si loo helo natiijooyinka. Natiijooyinka sidoo kale waxay ku yimaadaan 3 khariidado kala duwan:
The khariidada dareenka waxay muujineysaa meelaha shaashaddaada shaashadda ugu badan, dhexdhexaad ama ugu yaraan fiiro gaar ah u leh. Gaar ahaan meelaha indhuhu qabtaan waa midab casaan qani ah, celcelis ahaan aagag ayaa lagu calaamadeeyay huruud, meelaha ugu daciifsan ee shaashadaada ayaa ka muuqan doona cagaar ilaa buluug. Meelaha hufan kama soo baxaan wax dareen ah haba yaraatee.
The khariidada aragtida waxay bixisaa dulmarka ugu dhaqsaha badan ee dareenka boggaaga: waxay ku muujineysaa jaleecada waxa adeegsadayaashu arki doonaan 3-da ilbiriqsi ee ugu horreysa booqashadooda. Iyada oo ku saleysan xisaabinta muuqaalka muuqaalka ugu sarreeya iyo celceliska masaafada u jirta shaashadda, meelaha hufan ee khariidada aragtida ayaa ah kuwa ay isticmaaleyaashaadu arki doonaan inta lagu jiro marxaladda hanuuninta muhiimka ah.
The Gobollada Danta muuqaalka ayaa bixiya natiijooyinka ugu faahfaahsan ee EyeQuant. Waxay kuu suurta gelineysaa inaad ku qeexdo 10 gobol shaashaddaada, taas oo EyeQuant ay ku xisaabin doonto qiime boqolkiiba, tusaale + + 45% ama -23%. Qiimuhu wuxuu tilmaamayaa intee in le'eg (ama ka yar) meel muuqata marka la barbardhigo celceliska shaashadda.
Kharashka adeeggu waa wanaagsan yahay, oo leh 5 Falanqeyn oo ah $ 199 / mo US ama 50 $ 449. Waxa kale oo jira qiimeyn shirkadeed oo la heli karo oo is-dhexgalka waxaa lagu heli karaa labada Jarmal iyo Ingiriis. EyeQuant sidoo kale waxay leedahay a API iyo xirmada iibiyaha ayaa la heli karaa!
Tags: khariidaynta feejignaantakhariidadakhariidayntakhariidaynta aragtida
Is-beddelka Is-beddelka Suuq-geynta
Aasaasaha EyeQuant halkan. Waad ku mahadsan tahay qaylada Douglas! Kani waa bilowga oo EyeQuant wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo * runtii aad u qabow ah oo ku jira dhuumaha sanadka 2012. Haddii adiga ama mid ka mid ah akhristayaashaada aad qabtid wax su'aalo ah ama jawaab celin ah, waxaan jeclaan lahaa inaan kaa maqlo adiga oo u maraya fabian at eyequant dot com.